Madaxweynaha Barcelona Oo Kulan Gaar Ah La Yeeshay Quique Setien Kaddib Khilaafkii Ciyaartoyga | Laacibnet.net
Madaxweynaha Barcelona Oo Kulan Gaar Ah La Yeeshay Quique Setien Kaddib Khilaafkii Ciyaartoyga
Madaxweynaha Barcelone ee Josep Maria Bartomeu ayaa kulan la qaatay tababaraha Quique Setien oo ay ku kacsan yihiin duufaano khilaafyo ah oo u dhexeeya isaga iyo ciyaartoyda, taas oo ay u raacday kooxda oo lumisay dhibco muhiim ah oo sababi karaya inay horyaalka lumiyaan.
Sida ay sheegtay idaacadda RAC1 ee xarunteedu tahay gobolka Catalonia, Bartomeu oo ay wehelinayaan Eric Abidal, Javier Bordas iyo Oscas Grau ayaa Isniintii gurigiisa ugu tegay tababare Quique Setien, waxaanay kala hadleen xaaladda ay kooxdu gashay iyo hadalladii xanafta lahaa ee ay tababaraha iyo ciyaartoydu isku weydaarsadeen qolka lebbiska Celta Vigo markii ay soo dhamaatay ciyaartii ay Sabtidii barbaraha kula soo galeen.
Kulankan oo dhacay xilli la sheegayo in Barcelona ay shaqada ka caydhinayso tababaraha, ayay idaacadda RAC1 sheegtay in Bartomeu uu kalsooni u muujiyey Setien, laakiin uu dhinaca kale ka ahaa maslaxad iyo niyad dhis maadaama oo Axaddii uu si kulul ugu canaantay bandhiggii kooxdu kasoo hoysay Celta ee kusoo dhamaaday 2-2.
Barcelona oo caawa la ciyaaraysa Atletico Madrid oo haddii ay ka badin weydo ay u dhamaanayso hammigoodii xili ciyaareedka maadaama ay lix kulan oo kali ahi ka hadhsan yihiin dhamaadka xili ciyaareedka, isla markaana ay laba dhibcood ka dambeeyaan Real Madrid oo Khamiista la ciyaari doonta Getafe, waxa la rumaysan yahay in madaxweynuhu si dublomaasiyadaysan iskugu dayay in Setien uu uga maydho ciyaartoyda oo ixtiraam darro u muujiyey.
Kulanka Atletico Madrid oo ay ugu sii xigayso Villarreal, waxa Barcelona u taalla shaqo adag oo ah inay natiijooyin wanaagsan ka keento labadan ciyaarood, sidoo kalena ay rajayso in Real Madrid ay dhibco lumiso.